ओली सत्तामा हुँदासम्म एमाले भन्दै कुर्लेका टोपबहादुर भन्छन्, ‘म एमाले प्रवेश गरेको छैन’ ! « On Khabar
ओली सत्तामा हुँदासम्म एमाले भन्दै कुर्लेका टोपबहादुर भन्छन्, ‘म एमाले प्रवेश गरेको छैन’ !
सत्ताको उन्माद पनि अचम्मको हुँदो रहेछ । कम्युनिष्टहरु बलिष्ट बनेपछी बनेको बहुमतको सत्ता साझेदार गर्न नसक्दा पूरै पार्टी फुटाएर एक्लाएक्लै सत्तामा पुग्ने सपना देखेका कम्युनिष्टहरु सर्वाेच्चको निर्णयसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र भए । उतिबेला एमालेको रवाफ अलि बेग्लै थियो, किनकी सत्तामा थिए केपी ओली, केही माओवादी केन्द्रका मझधारका नेताहरु ओलीको निकट देखिए, मन्त्री पड्काए । जब पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्दै मन्त्री बने, त्यसपछि केही समय आखाँ नदेखेकाहरुलाई एकाएक संसदबाट पदच्युत भएपछि ब्युझे । ब्युझेपनि साना कुरा गरेनन, किनकी प्रधानमन्त्री तिनै ओली थिए । अब ओली चिप्लीएपछि चिल्लै भएका माओवादीका पूर्वनेताहरु आफूहरु एमालेमा प्रवेश नगरेको भन्दै मुकुण्डो देखाईरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्वनेता टोपबहादुर रायमाझीले आफू नेकपा एमालेमा प्रवेश नगरेको दाबी गरेका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सांसद पद कायम राखिदिन भन्दै दायर गरेको रिटमा रायमाझीले आफू एमालेमा प्रवेश नगरेको दाबी गरेका हुन् ।